DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA HP G62 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
VKontakte na ndabara na-enye onye ọrụ ọ bụla ikike iji jikọta akaụntụ yana ọrụ ndị ọzọ, gụnyere otu n'ime ihe ndị a maara nke ọma - Instagram.
N'agbanyeghị nnukwu ọdịiche dị n'etiti ndị a. netwọk, mgbe njikọta Instagram jikọọ na ibe VKontakte, ụfọdụ data nwere ike mekọrịta. Karịsịa, nke a metụtara foto na ọba foto, ebe ọ bụ, na nke mbụ, Instagram ka bụ ngwa maka ịdebe foto, VK na-akwadokwa ụdị atụmatụ ndị ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị jirila akaụntụ na saịtị abụọ ahụ, ọ bụghị naanị na-achọsi ike, ma ọbụlagodi na ọ dị mkpa ka ha kee ibe ha.
Anyị jikọtara VKontakte na Instagram
Iji malite, ọ bara uru ịchọrọ na usoro nke ịkọ akaụntụ na Instagram na Vkontakte dị iche site na usoro yiri nke ahụ na - enye gị ohere itinye akwụkwọ gị na Instagram. Anyị tụlere usoro a n'ụzọ zuru ezu na ederede kwekọrọ, nke, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi mmekọrịta zuru ezu, akwadoro ka ị gụọ.
Hụkwa: Otu esi ejikọta akaụntụ VKontakte na Instagram
N'ime ntuziaka a, anyị ga-atụle, ozugbo, usoro nke njikọta profaịlụ onwe, ohere ụfọdụ nke na-apụta n'ihi ngwunye dị otú ahụ, ma dokwuo anya nsogbu nke ịhapụ akaụntụ gị site na Instagram.
Instagram Instagram mwekota
Ọrụ VC na-enye gị ohere ijikọ naanị otu profaịlụ onwe na netwọk mmekọrịta netwọk na ibe gị. Biko rịba ama na ụdị ụdị a bụ n'ụzọ nkịtị a na-esi na-ebubata foto site na ọrụ ahụ metụtara.
Gbanwee na ebe nrụọrụ weebụ VC ma jiri isi menu dị n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo ịhọrọ "My Page".
N'ebe a, ị kwesịrị ịpị "Dezie"etinye n'okpuru foto profaịlụ gị.
Nakwa na nkebi nke ngalaba a ọ ga-ekwe omume ịga site na VK menu, meghere site na ịpị n'ọdụ ụgbọ elu gị n'akụkụ aka nri.
Site n'iji menu ihe ntanetị pụrụ iche n'akụkụ aka nri nke ibe na-emepe, gaa na taabụ "Ndi ana-akpo".
Gaa na windo na ala ma pịa njikọ. "Ijikọta na ọrụ ndị ọzọ"dị n'elu bọtịnụ nchekwa.
N'etiti ihe ọhụrụ a na-enye, họrọ "Hazie mbubata Instagram.com".
N'ebe a, ị nwere ike imekọrịta mmekọrịta zuru oke nke profaịlụ onwe gị na Twitter na Facebook site na iji usoro yiri nke ahụ.
Na windo windo ohuru juputara n'ubi "Aha njirimara" ma "Paswọdu" dịka nkọwa gị maka ikike na ngwa Instagram.
Gụọ "Aha njirimara" nwere ike jupụta n'ọtụtụ ụzọ, ma ọ bụ nọmba ekwentị ị kwuru kpọmkwem na Instagram ma ọ bụ adreesị ozi-e.
Dejupụta n'ubi a kapịrị ọnụ, pịa "Nbanye"iji mebie usoro nhazi.
Na windo na-esote, ịkwesịrị ikwenye na ị na-ejikọ akaụntụ gị na ngwa Instagram na netwọk mmekọrịta gị na VKontakte. Iji nọgide na usoro nhazi, pịa bọtịnụ ahụ. "Ikike".
Iji windo ohuru "Instagram mwekota" Ị nwere ike ịhọrọ kpọmkwem otú faịlụ ga-esi na netwọk mmekọrịta a. Ya mere, ihe ndị ọzọ metụtara usoro nhazi nwere ike inwe ọtụtụ ihe dị iche iche.
Na igbe ntọala "Bubata Foto" Họrọ usoro mbufe data nyere gị ohere.
Ọ bụrụ na ihe ahụ akara "Iji họrọ album", ntakịrị n'okpuru nchịkọta a nwere ohere ọzọ iji họrọ otu ọba egwu nke a ga-azọpụta ihe oyiyi niile.
Site na ndabara, a ga-eme ka ịmepụta ọkpụkpọ ọhụrụ. InstagramOtú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere nchekwa ndị ọzọ na foto, ị nwekwara ike ịkọwa ha dị ka isi ọrụ ndekọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka niile posts Instagram na-edepụta ya na mgbidi gị na njikọ kwekọrọ na ya, a na-atụ aro ịhọrọ "N'elu mgbidi m".
N'okwu a, a ga-etinye foto niile na VK album. "Foto dị na mgbidi m".
Ihe ikpeazụ na-enye gị ohere ịhazi usoro nke izipụ ihe ndekọ sitere na Instagram VKontakte. Site na ịhọrọ usoro mbubata a, a ga-etinye ihe niile posts na otu n'ime ihe abụọ hashtags pụrụ iche na mgbidi gị ma ọ bụ na listi mbụ e dere kpọmkwem.
Mgbe ịtọ ntọala a chọrọ, pịa "Chekwa" na windo a, nakwa mgbe ọ mechichara ya, na-enweghị ahapụ ngalaba ntọala "Ndi ana-akpo".
N'ihi ihe ndị ahụ edozi, foto niile e bipụtara na ngwa Instagram na ihe ha jikọtara ga-abanye na weebụsaịtị VC. Okwesiri iburu otu ihe di mkpa karia, nke gunyere n'eziokwu na uzo nnoo di otua.
Ọ bụrụ na ị nwere ihe isi ike na mbubata, a na-atụ aro ka ị laghachi azụkọrịta site na Instagram na-enweghị. N'ọnọdụ nke ọdịda, naanị ezigbo ngwọta bụ ichere ka a rụzie usoro ahụ. Ị nwere ike ịghagharịa Instagram posts na VK n'oge a site na usoro kwekọrọ na ngwa a.
Gbanyụọ njikọta nke Instagram Vkontakte
Usoro iwepụ ihe ndekọ Instagram site na ibe onye nke VK abụghị ụdị dị iche na nke mbụ nke profaịlụ na-ejikọta ọrụ.
Ịnọ na taabụ "Ndi ana-akpo" na mpaghara ntọala "Dezie", mepee windo ntọala Instagram.com.
Na mpaghara mbụ "Onye ọrụ" pịa njikọ ahụ "Gbanyụọ"tinye na brackets mgbe aha njirimara Instagram.
Kwenye omume gị na windo ọzọ nke meghere site na ịpị "Nọgidenụ n'ihu".
Mgbe emechi windo, pịa bọtịnụ ahụ. "Chekwa"tinye ya n'ala ala "Ndi ana-akpo".
Na mgbakwunye na ihe ekwuru, ọ dị mkpa iburu n'obi na tupu ịjikọ akaụntụ ọhụrụ, a na-atụ aro ịbanye na profaịlụ profaịlụ a na ihe nchọgharị weebụ a ma ọ bụbu mgbe ịmalitere usoro.